Ampidiro ny adiresy mailaka noho ny tantara. Ny fehezan-dalàna fanamarinana dia halefa ho anareo. Rehefa avy nandray ny fanamarinana fehezan-dalàna, dia ho afaka mifidy tenimiafina vaovao ho an'ny tantara.
Carl Henry ONLINE! EBook SUCCESS
Te-hanangana orinasa an-tserasera ve ianao? Afaka manampy anao amin'ny orinasa rehetra ianao!
Miezaha hanana ny toerana rehetra mialoha, hahafantaranao ny fotoana hanomezana ireo antsipiriany anao amin'ny antsipiriany ary ahazoana antoka fa vonona hanamafy ny torolalanao amin'ny lafiny hafa.
Ataovy antoka fa efa nandalo tamin'ny paikady fampandehanana miaraka amin'ny mpitrandraka broker anao ianao ary ahazo azy ireo hanatontosa ny karama voalohany izay takian'ny mpitrandraka antoka, antoka fa raha mila mangataka vola ianao dia mandeha tsara izany.
Tohizo ihany koa ny hahafantaranao ny fomba entina handinihana ny mpandinika ary amin'ny alalan'iza, faritra iray izay mihazona ny fividianana ny fividianana izany fa raha vantany vao vita ny 'fanadihadiana' nataon'ireo mpivarotra dia manomboka mandray anao amin'ny fomba matotra.
Raha vao manana ireo fototra ireo ianao dia mila manapa-kevitra hoe ahoana no handraisanao ny fanadihadiana araka izay natolony anao, tsy maintsy mijery ny faritra misy anao ianao ary mamantatra ny zavatra toy ny salanisa midadasika, ireo sehatra samihafa ao amin'ny faritra misy anao, izay mampiseho ambany, ambany ary ambony mahate hihinana.
Amboary ao an-tsainao ireo soatoavina isan-karazany mamaritra ny faritra tsirairay & ny karazan-trano tsirairay. Ataovy azo antoka fa takatrao ny fiverenan'ny mendrika takian'ny mpividy anao mba hahazoana ny fividianana antoka raha toa ianao ka handeha hividy-to-let anao na izay toetra hafa ampiasaina hanombanana ny fanananao amin'ny famatsiana. Ilaina ihany koa ny hahazoana fahatakarana amin'ny fananganana sy ny fikojakojana ny lany amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpanamboatra sy manomana fifandraisana izay azonao atao amin'ny ho avy.
Rehefa avy nanorina ny angon-drakitrao ianao dia mila mametraka ireo tarehimarika manan-danja izay hampiasainao hamakafakandrihana ny fifanolanana tsirairay, araka ny nambarany, dia tokony ho fantatrao haingana raha toa ka misy ny fifanarahana aminao na tsia - farafaharatsiny tokony ho fantatrao raha misy ny ampahany amin'ilay fifanarahana izay azonao iainana miaraka ary ny ampahany tokony havaozina.
Tsy maintsy fantarinao ny zavatra toy ny vola finoan-drongony izay azonao raisina, inona no azonao amboarina, manapa-kevitra amin'ny farafara farafaharatsiny tianao handoavam-bola any amin'ny faritra iray ho an'ny karazana fananana iray manokana ary inona avy ireo asa efa nomaninao hatao - Izany rehetra izany dia hahatonga anao hibanjina ary hanampy anao hanao asa matihanina.
Hamafiso ny lafiny rehetra amin'ny raharahanao